Mahazo tombony amin'ny horonantsary sosialy ve ny orinasanao? | Martech Zone
Alatsinainy, Septambra 15, 2014 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Androany maraina dia nandefa izahay Maninona ny orinasanao no tokony hampiasa horonantsary amin'ny marketing. Fivoahana iray hampiasana ny horonan-tsary izay mitarika fampiroboroboana mahomby sy valiny dia ireo tranokala video sosialy, miaraka amin'ny fiakarana be eo amin'ny fampiasana sy ny fahitana azy. Manararaotra ireo paikady ireo ny orinasa ary mamokatra valiny tsotra sy mahavariana izay jerena bebe kokoa, zaraina bebe kokoa, ary mitondra fahatakarana lalindalina kokoa ny marika sy ny tahan'ny fiovam-po ambonimbony.
afa-tsy Youtube, misy sehatra video hafa maro. Vine, Vimeo, Google+ Hangouts ary Instagram dia toerana tsara rehetra hizarana horonantsary ary handray anjara amin'ny lafiny sosialy amin'ny e-marketing miaraka amin'ny tenifototra sy ny meta-information. Mandrosoa amin'ny tontolon'ny horonantsary sosialy androany! Mifandraisa amin'ny olona raha manampy amin'ny fifanakalozan-kevitra misy amin'ny orinasanao sy ny marika misy anao amin'ny fampielezana horonan-tsary azo resahina, mahafinaritra ary mahomby. Megan Rigger, Sigma Web Marketing.
Mety halaim-panahy ireo orinasa lehibe sasany mampiantrano horonan-tsary samirery fa tsy hanome torohevitra izany izahay. Ity ny famafana ireo tranokala horonantsary ambony ambony indrindra sy ny statistikan'ny mpihaino mifanaraka amin'izany. Miaraka amin'ny fampiasam-bola lehibe dia mety handresy ny fanamby amin'ny fampiantranoana ianao - saingy tsy ho tratrarinao mihitsy ny fotoana azon'ny mpanatrika an'ity tranonkala ity:
Youtube no tranonkala faharoa be mpitsidika indrindra eran'izao tontolo izao ary ny motera fikarohana lehibe indrindra faharoa - miaraka amin'ny fitsidihana isam-bolana maherin'ny 1 lavitrisa ary mihoatra ny 6 miliara ora ny horonan-tsary jerena isam-bolana.
Vimeo manome orinasa manana safidy hafa mahasarika ny Youtube. Toerana 250,000 XNUMX mahery no mampiasa Vimeo.
Ny Google Hangouts dia natambatra tato ho ato amin'ny Google Apps ary fomba mora hizarana ny demo sy ny tafa sy dinika mivantana avy eo hizara izany amin'ny manaraka.
Instagram natomboka ho toy ny tranonkala fizarana sary fa manohana horonantsary izao. Tamin'ny volana oktobra 2013, 40% amin'ireo horonan-tsary zaraina be indrindra no noforonin'ny marika.
Vine dia karazana Twitter amin'ny horonantsary (ary an'ny Twitter), mamela ny fizarana horonantsary fohy. Tsy ela velona anefa izy ireo!
Tags: google hangoutsInstagraminstagram marketinghoronantsary sosialyhoronantsary sosialy ho an'ny orinasaVimeomarketing vimeovoalobokavarotra voalobokaYouTubeyoutube marketing
Sep 16, 2014 ao amin'ny 12: PM PM
Ny mpandraharaha rehetra dia tokony hampiasa marketing video Manaiky 100% aho! Manana bilaogy maromaro aho izay manasongadina an'io hevitra io. Tsy ny marketing amin'ny horonan-tsary ihany no tokony ho iray amin'ireo fomba lehibe hanaovanao doka fa ny fahafantarana ny fomba hanaovana ireo horonantsary ireo mba hananan-karena amin'ny votoatiny sy hamboarina ho SEO. Tsy ny orinasa ihany no tokony hanokana fotoana hanaovana marketing video fa mila manao ny horonantsarin'izy ireo. ny marina na ny horonantsarin'izy ireo sy / na ny orinasa tsy ho hita velively. Lahatsoratra tena tsara amin'ny marketing video!